Water Bath Ịgba Mmiri ara ehi Pasterization Machine - China Qingdao Otu ebe Machinery
The mmiri bath pasterization igwe ka nke elu mma SUS304 steel.The igwe anaghị agba ígwè ntupu belt dị elu ike na ala ekwedo, dịghị mfe deform na mfe mmezi. The okpomọkụ na-agba bụ mgbanwe dị ka mmepụta technology chọrọ. The igwe na-agba ọsọ bụ were were. Nke a pasterization mmepụta bụghị naanị enwekwukwa na nwoke ịga ụlọ ọgwụ arụmọrụ ma-edozi nsogbu nke na-ezughị ezu na mkpumkpu nwoke ịga ụlọ ọgwụ nke mere site ala akpaka larịị. The ngwaahịa ...
The mmiri bath pasterization igwe ka nke elu mma SUS304 steel.The igwe anaghị agba ígwè ntupu belt dị elu ike na ala ekwedo, dịghị mfe deform na mfe mmezi. The okpomọkụ na-agba bụ mgbanwe dị ka mmepụta technology chọrọ. The igwe na-agba ọsọ bụ were were.
Nke a pasterization mmepụta bụghị naanị enwekwukwa na nwoke ịga ụlọ ọgwụ arụmọrụ ma-edozi nsogbu nke na-ezughị ezu na mkpumkpu nwoke ịga ụlọ ọgwụ nke mere site ala akpaka larịị.
Mmepụta akara adopts pasterization technology. Ọdabara pickled vegetables, ala-okpomọkụ anụ na ngwaahịa, soy agwa mmiri ara ehi na ngwaahịa, jelii na ndị ọzọ na ihe oriri na onunu ala-okpomọkụ nwoke ịga ụlọ ọgwụ.
Ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ozugbo mbukota ngwaahịa, anyị nwere ike jikọọ a ọcha ikuku ihicha akara ya.
Previous: Electric ma ọ bụ Steam Okpomọkụ Hot Air Food Ihicha Machine
Osote: Meat Food Defrosted Equipment
100l Vetikal Autoclave
18l Ma ọ bụ 23l Dental Autoclave
Autoclave N'ihi Canning
Autoclave N'ihi ịwa Instrument
Autoclave kwụ Industrial
Autoclave With Manual
Automatic Autoclave kwụ Industrial
Mejupụtara Autoclave N'ihi Sale
Siwanye Portable Steam Autoclave
Siwanye Steam Autoclave
Digital Vetikal Type Autoclave
mmiri ara ehi pasterizer
mmiri ara ehi pasteurizer
pasterization igwe mmiri ara ehi
Portable Autoclave N'ihi Sale
Obere Portable Autoclave
Igwe anaghị agba nchara polishing Autoclave
Isiokwu Top Autoclave
Agụụ Ihicha Autoclave
Agụụ mgbapụta N'ihi Autoclave
Vetikal Laboratory Autoclave